स्वास्थ्यका लागि ज्वानो-मेथी::Milap News
हाम्रो भान्सामा भएका अधिकांश मसलाहरुको सहितरिकाले प्रयोग गर्ने हो भने औषधिकारुपमा रहेका हुन्छन् । त्यस्तै हाम्रो भान्सामा हुने मसलामध्येको एक मेथीलाई पनि सहि प्रयोग गरियो भने औषधि हो । हरियो सागपातको रुपमा मात्र नभै मसलाको रुपमा समेत मेथी धेरै मानिसको रोजाइमा पर्ने चिज हो । मेथीलाई धेरै मानिसले चिसो निवारकको रुपमा जाडो याममा सेवन गर्ने गर्छन् ।
मेथीमा औषधीय गुण पाइन्छ भन्ने कुरा धेरैलाई थाहा छ तर यसमा कुन कुन रोगका लागि लड्ने क्षमता हुन्छ भन्ने बारेमा भने धेरैलाई जानकारी नहुनसक्छ । वास्तवमा मेथीलाई शरीरको दुखाइ, स्नायु रोग, पिसाब सम्बन्धि रोग, रक्तअल्पना लगायतका समस्या भएका मानिसले सेवन गरेमा त्यसले फाइदा गर्छ । साथै स्वास प्रस्वास सम्बन्धि रोग जस्तै ब्रोङ्काइटिस, इन्फुलयन्जा, पिनास, रुघाखोकी जस्ता रोग र ज्वरो आएका बेला पनि मेथीको सेवन लाभदायी मानिन्छ ।
अनुहारमा डण्डीफोर आएको बेला मेथीको पातलाई पिँधेर अनुहारमा लगाउनाले डण्डीफोरको समस्या कम हुन्छ । त्यस्तै मेथीको गेडालाई पिँधेर धुलो बनाउने अनि विहान बेलुकी पानीमा मिलाएर पिउँदा रगतमासीको समस्या कम हुन्छ र यसले पाइल्सका रोगीलाई पनि फाइदा गर्छ ।
जिउको सुन्निएको भागमा मेथीको लेपन लगाएमा फाइदा मिल्छ । कपाल झर्ने समस्या छ भने मेथीको धुलोलाई पानीमा मिलाएर कपालको जरा जरासम्म लगाउनुहोस् अनि केहीबेर राखेर पखाल्नुहोस् । यसले कपालको चायाँ पनि कम गर्छ । मेथीको सागको नियमित सेवनले कब्जियतको समस्या पनि कम हुन्छ । चिसोले सताएको छ ? रुघाखोकी लागेको छ ? यदि त्यसो हो भने तोरीको तेल तताएर त्यसमा मेथी पड्काउनुहोस् अनि त्यो तेल मनतातो पारी टाउकोमा लगाउनुहोस् त्यसले चिसो भगाउँछ । मेथीलाई सागको रुपमा पनि बहुउपयोगि मानिन्छ । यसको साग जति स्वादीलो हुन्छ, त्यतिकै शरीरलाई फाइदा पनि ।
तरकारी पकाउँदा तेल तातेपछि ज्वानो–मेथी फुराउने चलन धेरै गृहिणीको छ । अझ सुत्केरीलाई त ज्वानाको झोल उत्तम मानिन्छ । सुत्केरी भएको बेला पोषिलो खानेकुराको रुपमा ज्वानाको उपभोग गर्ने गरिएपनि अरुबेला ज्वानो–मेथीको प्रयोग स्वादको हिसाबले मात्र गरिन्छ । तर ज्वानो–मेथीमा स्वाद मात्रै नभएर निकै तागतिलो र पौष्टिक पदार्थ पाइने विशेषज्ञहरु बताउँछन् ।
विज्ञहरुका अनुसार ज्वानोको सबैभन्दा ठूलो विशेषता यसमा रहेको क्याल्सियम हो । एक चिया चम्चा ज्वानोमा ७६ मिलिग्राम क्याल्सियम पाइन्छ । कुपोषण भएका र, लामो बिमारीपछि उठेका बालबालिका, वृद्धा, गर्भवती महिला सबैलाई ज्वानोको प्रयोगले फाइदा पु¥याउँछ । किनकि घरमा पाइने ज्वानो सबैभन्दा बढी क्याल्सियम भएको वस्तु हो । सुत्केरी अवस्थामा ज्वानोको विशेष प्रयोग गर्नुको कारण ज्वानोले शरीरलाई चाहिने आवश्यक क्याल्सियमको परिपुर्ति गर्छ, साथै आमाको दूध पनि बढाउँछ । आमाको दूधबाट बच्चालाई पनि क्याल्सियम प्राप्त हुन्छ । त्यस्तै क्वाँटी वा गेडागुडी पकाएपछि ज्वानोले झान्ने चलनको पनि वैज्ञानिक कारण रहेको यसका जानकारहरु बताउँछन् ।
क्वाँटी वा गेडागुडी खानाले कसैकसैलाई पेटमा ग्यास –वायु हुने गर्छ र पेट डम्म फुलेजस्तो हुने अनि क¥याङकुर्लुङ् गरेर कराउने हुन्छ । ज्वानोले वायु हुनबाट रोक्छ । घाँटी दुखेको बेलामा पानीमा ज्वानो राखेर उमाली त्यसमा अलिकता नुन मिसाई कुल्ला गर्नाले फाइदा गर्छ । ज्वानो, नुन र ल्वाङलाई मुखमा हालेर बिस्तारै रस चुस्नाले खोकी लागेको पनि कम हुन्छ । त्यसरी नै नाक टम्म बन्द भएको बेला दिनमा दुई-तीन चोटि ज्वानो पानीको बाफ लिनाले नाक खुल्छ । ०००